Cuntada: Sida loo Naqiijiyo Gaadiidka Gudaha Google Analytics?
Ganacsiyo badan ayaa maamula macaamiishooda iyagoo adeegsanaya qalabka socodka socodka. Cinwaanka IP ee user ah wuxuu noqon karaa farsamada lagama maarmaanka u ah kormeerka tayada booqashooyinka webka ee imanaya domainkaaga. Dadku waxay isticmaalaan shabakadaha e-commerce waxay shaqaaleeyaan suuq-geynta suuqa xirfadaha sida SEO ah si ay u helaan macaamiishooda. Nidaamyadani waxay isticmaalaan qalabyada sida Google Analytics, oo u muuqda inay kormeerayaan oo ay siinayaan hab aad u ballaaran oo lagu gaari karo bartilmaameedkaaga - door & access systems news magazine. Qalabka sida Google Analytics (GA) waxaa ku jira macluumaad muhiim ah sida taraafikada taraafigga iyo isbeddelka. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood, baabuurtu waxay ka imaan karaan shirkaddaada. Isticmaalka qaar ka mid ah shabakadaada gudaheeda ururkaaga ayaa laga yaabaa inay keenaan booqashooyinka webka, kuwaas oo aan macnaheedu ahayn inay u beddelaan iibka. Tusaale ahaan, mararka qaarkood, shirkaddaadu waxay cusbooneysiin kartaa waxyaabaha website-yada ah sida logos, xarfaha, iyo content.
Waa lagama-maarmaan in la saxo taraafikada gudaha ee xogta GA si loo helo sawir sax ah dhaqanka suuqa. Si aad arrintan ugu guulaysato, hoos ugu dhig talooyinkooda soo socdaa ee ay bixiso Ross Barber, khabiir ka socda Semt .
Xogta ay leedahay taraafikada gudaha waxay keeni kartaa sawir khaldan ee xeeladaha suuq-geynta internetka. Waxaa intaa dheer, waxay ku dhufatey xogtaada, taas oo adkeyneysa in la hagaajiyo xeeladaha suuq-geynta. Qofka leh website wuxuu u baahan yahay inuu wax ka bedelo GA si uu u xaddido taraafikada gudaha ka muuqata sawirka rikoorka booqdaha..
Macluumaad muhiim ah oo ku saabsan cinwaanka IP
Marka browser uu isku dayayo in uu booqdo websaydh, server wuxuu diiwaangeliyaa booqashada shabakadda adreeska IP. Cinwaanka IP-ga wuxuu u egyahay cinwaan caadi ah, keliya in laga helo internetka. Badanaa bixiyeyaasha adeegga internetka waxay ku hayaan isku xirka shabakadda oo siinaya server-ka codsi IP ah. Habka ugu fudud ee qofku u helo cinwaanka IP-ga kombuyuutarku wuxuu ka yimid mashiinka raadinta s. Tusaale ahaan, raadinta sahlan ee Google "maxay tahay cinwaanka IP-ga." Waxaad u bedeli kartaa qorshaha IP-da ee qorshaha isku xirka ee shirkaddaada. Markaad hesho cinwaankaaga IP, waxaa suurtogal ah in laga saaro booqashooyinkeeda Google Analytics
Sida loo xakameynayo taraafikada gudaha gudaha Google Analytics
Qofka awood u leh in uu galiyo taraafikada gudaha, xisaab GA waa daruuri. Waa inaad gasho xisaabtaada GA. Markaad gasho, waxaad ka saari kartaa cinwaankaaga IP. Si aad tan u samayso, u gudub tifatirka maamulka. Waxaad ka heli kartaa dhinaca midigta ama geeska midig ee shabakada internetka. Ka soco kan arrintan, riix "menu". Riix badhanka guduudan oo magac u samee shaandhada aad isticmaalayso. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad sameyso mustaqbalka mustaqbalka ee shaandhada caadada ah, markaa waa lagama maarmaan in la isticmaalo magaca.
Riix liiska hoos-hoosaadka oo aad doorato xulashada "nooca filter-ka ah". Xulashadan, waxaad awoodi kartaa inaad gasho cinwaanka IP aad rabto in lagaa saaro. Fur cinwaanka IP ee kombiyuutarka aad isticmaasho, ama cinwaanka IP-ga ee shirkaddaada. Cinwaanka IP-ga waxaa laga heli karaa raadinta aad samaysay tallaabada kowaad. Had iyo jeer xasuuso inaad keydsato wixii isbeddel ah ee aad sameyso GA. Had iyo jeer hayso fikrado badan si aad dib ugu noqotid isbeddelada haddii ay dhacdo wax qaldan.